သူကိုဆဲနေကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကို ခပ်ချေချေပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ခြူးလေး – Cele Top Stars
သူကိုဆဲနေကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကို ခပ်ချေချေပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ခြူးလေး
July 10, 2021 By admin2News
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ခြူးလေး ကတော့ လူမျိုးရေးကိစ္စတွေကြောင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် လုံးဝ ဝင်မပါခဲ့ဘဲ နှုတ်ပိတ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်များကလည်း ခြူးလေးကြော်ငြာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းကို boycott လုပ်ခဲ့တာကြောင့် တော်တော် အကြပ်ရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်နော်…။
မနေ့ကလည်း ခြူးလေး က သူမကိုဆဲတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ” ဟယ် လူလို စကားကောင်းကောင်းလေးဘဲပြောတာပါဟယ် ဘုရား​ရေ သူ့ကို လူလို ရှင်းပြတယ် ဆိုတာကလည်း လူလိုပြောရင် လူလို နားလည်လိမ့်မယ် ဦးနှောက်ရှိလိမ့်မယ် လို့ အထင်ကြီး မိလိုက်လို့ပါ …. လူကဲခတ်ညံ့သွားတယ် sorry ပါ …. ဘာရေးလည်းဆိုတာ ရေးထားတဲ့အရေးသား က ရိုင်းလားဆိုတာ သိချင်ရင် တော့ ပြောကြပါ …. စာက ရှိပါသေးတယ် ပြပါ့မယ် ရှင် …. လူတိုင်းကိုလည်းလိုက်ရှင်းမပြချင်သလို ဘာမှ လည်းမလို အပ်ဘူးလေ ရှင်းပြတော့ကော ဘာဖြစ်လာမှာမို့လို့လဲ ….. ကိုယ့်မိသားစုတွေ သူနဲ့ fri တွေဖြစ်နေလို့ မကောင်းလို့ ရှင်းပြပေးလိုက်တာပါရှင် …..
So So Sorry ပါ အမရယ် ……ကျွန်မ ချန်ဖူးတွေကိုတော့ မစော်ကားပါနဲ့ သူတို့က ကျွန်မ ဘာလုပ်နေလဲ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အကုန် သိထားတဲ့သူတွေမို့လို့ပါ …..ချန်ဖူးတွေလည်း အမကို ဘယ်လိုဘဲ ထင်ကြေးတွေနဲ့ ဆဲနေပါစေ …. စိတ်တိုပြီး ပြန်မပြောကြပါနဲ့ …..လူတွေက သူများကို သာ ဆဲတတ်ကြတာ သူတို့ကို ပြန်ပြောရင် အသည်းခိုက်အောင် နာတတ်ကြတယ် ….”“ ကျွန်မကိုဒဲ့ဆဲထားတဲ့ အစ်ကိုကြီး၊အစ်မကြီးများ ခေတ်လည်းပြန်မကောင်းသေးပါဘူးကွယ် COVID ကလည်းအရမ်းဆိုးနေတော့ casting တွေ ဇွတ် မဝင်ကြပါနဲ့ စိတ်ပူလို့ ” ဆိုပြီး ခပ်ချေချေပြောထားပါသေးတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
ခဈြလှစှာသော ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ခွူးလေး ကတော့ လူမြိုးရေးကိစ်စတှကွေောငျ့ နှဦေးတျောလှနျရေးတှငျ လုံးဝ ဝငျမပါခဲ့ဘဲ နှုတျပိတျနထေိုငျခဲ့ပါတယျနျော။ ပရိသတျမြားကလညျး ခွူးလေးကွျောငွာတဲ့ ကုနျပစ်စညျးတိုငျးကို boycott လုပျခဲ့တာကွောငျ့ တျောတျော အကွပျရိုကျခဲ့ပါသေးတယျနျော…။
မနကေ့လညျး ခွူးလေး က သူမကိုဆဲတဲ့ ပရိသတျတှကေို ” ဟယျ လူလို စကားကောငျးကောငျးလေးဘဲပွောတာပါဟယျ ဘုရား​ရေ သူ့ကို လူလို ရှငျးပွတယျ ဆိုတာကလညျး လူလိုပွောရငျ လူလို နားလညျလိမျ့မယျ ဦးနှောကျရှိလိမျ့မယျ လို့ အထငျကွီး မိလိုကျလို့ပါ …. လူကဲခတျညံ့သှားတယျ sorry ပါ …. ဘာရေးလညျးဆိုတာ ရေးထားတဲ့အရေးသား က ရိုငျးလားဆိုတာ သိခငျြရငျ တော့ ပွောကွပါ …. စာက ရှိပါသေးတယျ ပွပါ့မယျ ရှငျ …. လူတိုငျးကိုလညျးလိုကျရှငျးမပွခငျြသလို ဘာမှ လညျးမလို အပျဘူးလေ ရှငျးပွတော့ကော ဘာဖွဈလာမှာမို့လို့လဲ ….. ကိုယျ့မိသားစုတှေ သူနဲ့ fri တှဖွေဈနလေို့ မကောငျးလို့ ရှငျးပွပေးလိုကျတာပါရှငျ …..
So So Sorry ပါ အမရယျ ……ကြှနျမ ခနျြဖူးတှကေိုတော့ မစျောကားပါနဲ့ သူတို့က ကြှနျမ ဘာလုပျနလေဲ ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတာ အကုနျ သိထားတဲ့သူတှမေို့လို့ပါ …..ခနျြဖူးတှလေညျး အမကို ဘယျလိုဘဲ ထငျကွေးတှနေဲ့ ဆဲနပေါစေ …. စိတျတိုပွီး ပွနျမပွောကွပါနဲ့ …..လူတှကေ သူမြားကို သာ ဆဲတတျကွတာ သူတို့ကို ပွနျပွောရငျ အသညျးခိုကျအောငျ နာတတျကွတယျ ….”“ ကြှနျမကိုဒဲ့ဆဲထားတဲ့ အဈကိုကွီး၊အဈမကွီးမြား ခတျေလညျးပွနျမကောငျးသေးပါဘူးကှယျ COVID ကလညျးအရမျးဆိုးနတေော့ casting တှေ ဇှတျ မဝငျကွပါနဲ့ စိတျပူလို့ ” ဆိုပွီး ခပျခခြေပြွေောထားပါသေးတယျ ပရိသတျကွီးရေ….
အောက်စီဂျင်စက်ရုံတည်ဆောက်နေစဉ် အောက်စီဂျင် Concentrator တွေအရင်ဆုံးလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောနန္ဒာလှိုင်
ခွဲခွါသွားတာမကြာသေးတဲ့ သားဖြစ်သူကိုတစ်နေ့မှမေ့မရပဲ ၀မ်းနည်းစွာငိုကြွေးနေတဲ့ ရေမွန် မိခင်ရဲ့ဗီဒီယို